मोहनको गीतले भन्दैछ, मेरो मनमा के को हुरी चल्दैछ ? (भिडियो) « Mazzako Online
मोहनको गीतले भन्दैछ, मेरो मनमा के को हुरी चल्दैछ ? (भिडियो)
मोहन राई पेशाले युवा विजनेशम्यान हुन् । तर पछिल्लो समय उनले गायकको रुपमा समेत चर्चा कमाइरहेका छन् । उनको पहिलो गीतको म्युजिक भिडियो ‘यो आखाले ताकेको’ बोलको गीतलाई दर्शक श्रोताहरुले अत्याधिक रुचाएपछि गायन विधामा पनि उनको परिचय थपिएको हो ।